Реферат - Оспа птиц - Ветеринария
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ПТИЦ<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">птиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> — <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">контагиозное<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">вирусное<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">заболевание<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">на<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">блюдается<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">преимущественно<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">у<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">птицы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">возрасте<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> 4-12 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">меся<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">цев<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">; <span Georgia",«serif»;color:black">проявляется<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">развитием<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">оспенной<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">экзантемы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">на<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">неопе<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">­<span Georgia",«serif»; color:black">ренных<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">участках<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">кожи<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">ног<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">головы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">на<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">гребне<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">сережках<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">мочках<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">вокруг<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">клюва<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">носовых<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">отверстий<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">на<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">подклювье<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">веках<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">Могут<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">образоваться<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">дифтероидные<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">поражения<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">на<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">сли<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">зистой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">ротовой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">полости<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> — <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">дермотропный<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">относится<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">к<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">ДНК<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">-<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">содержащим<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">из<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">группы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">покс<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: .05pt">-<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">вирусов<span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.05pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">Диаметр<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">элементар<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ных<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">вирусных<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">) <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">частиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">телец<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">Борреля<span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.1pt">) 255 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">мкм<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">Имеется<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">четыре<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">разновидности<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">: <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">кур<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">индеек<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">голубей<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">ка<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.45pt">нареек<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.45pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">вирусов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">птиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">идентичны<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">антигенам<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">ви<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">русов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">оспы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">коров<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">миксоматоза<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">кроликов<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">эктромелии<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">мы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">­<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">шей<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.15pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">Вирусу<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">голубей<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">родственен<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">перепелов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.95pt;mso-ansi-language:EN-US">Q<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing: -.95pt">Р<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.95pt">-241.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">природе<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">циркулируют<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">высокопатогенные<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">природно<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt">ослабленные<span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">штаммы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">кур<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">поражают<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">ХАО<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">вирионы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">обнаруживаются<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">тканях<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">органах<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">куриного<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">эмбриона<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">Вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">голубей<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">не<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">вызывает<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">генерализованного<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.15pt">процес<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.15pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">са<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">эмбрионе<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">размножается<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">преимущественно<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">отслоен<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">ном<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">участке<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">ХАО<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">организме<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">цыплят<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">репликация<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">происходит<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">клеточной<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">цитоплазме<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">диффузно<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">с<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">последующей<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">агрегацией<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">его<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">во<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">включениях<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">Образование<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">пораженных<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">клет<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ках<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">патогномонично<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">для<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">кур<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">Выходит<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black">из<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">клетки<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">почкованием<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">через<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">клеточную<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">оболочку<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">оспой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">куры<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">индейки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">цесарки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">павлины<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">голу<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">би<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">, <span Georgia",«serif»;color:black">редко<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">гуси<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">утки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">. <span Georgia",«serif»;color:black">Иногда<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">спонтанно<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">заболевают<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">фаза<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">­<span Georgia",«serif»; color:black">ны<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">куропатки<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">перепелки<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">горлицы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">попугаи<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">зяблики<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">во<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">­<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">робьи<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: .15pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">галки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">чайки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">Большинство<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">штаммов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">вируса<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">кур<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">патогенно<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">для<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">указанных<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">птиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">Некоторые<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">штаммы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">могут<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">заражать<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">ворон<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">уток<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">канареек<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">ястребов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">Встречают<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">ся<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">би<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">- <span Georgia",«serif»;color:black">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">трипатогенные<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">штаммы<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">заражающие<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">кур<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">голубей<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.5pt">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.5pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.5pt">индеек<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.5pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">Птица<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">заражается<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">при<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">контакте<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">с<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">боль<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">ными<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">особями<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">через<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">контаминированные<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">вирусом<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">корма<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">воду<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">подстилку<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">инвентарь<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">одежду<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">обслуживающего<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">пер<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">сонала<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">. <span Georgia",«serif»;color:black">Инкубационный<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">период<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> 4-14 <span Georgia",«serif»; color:black">дней<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">попадает<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">во<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">внешнюю<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">среду<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">с<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">отпадающим<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.2pt">детри<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.2pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">том<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">кожного<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">эпителия<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">котором<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">он<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">сохраняется<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">до<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt"> 18 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.1pt">лет<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.1pt">), <span Georgia",«serif»;color:black">слизистыми<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">выделениями<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">из<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">ротовой<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">носовой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">полостей<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">глаз<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">с<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">пометом<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">Переносится<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">не<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">только<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">сельско<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black">хозяйственной<span Goudy Old Style",«serif»; color:black">, <span Georgia",«serif»;color:black">но<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»; color:black">и<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">синантропной<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">птицей<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">, <span Georgia",«serif»; color:black">а<span Goudy Old Style",«serif»;color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">также<span Goudy Old Style",«serif»; color:black"> <span Georgia",«serif»;color:black">грызуна<span Goudy Old Style",«serif»;color:black">­<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt">ми<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.35pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">кровососущими<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">насекомыми<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">В<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">организме<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">комаров<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">С<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt;mso-ansi-language: EN-US">ul<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.35pt">ех<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.35pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">А<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language: EN-US">edes<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt;mso-ansi-language:EN-US">s<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt">рр<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.25pt">.) <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">сохраняется<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">не<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">размножаясь<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">более<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt"> 200 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.25pt">дней<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.25pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">В<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">организме<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt">клещей<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: -.3pt">-<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt">орнитодорусов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">вирус<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">сохраняется<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt"> 97 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.3pt">дней<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.3pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">у<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">персидских<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">клещей<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> — 30 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">дней<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">у<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">клопов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">мух<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">-<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">жигалок<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> -<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: .1pt">20 <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">дней<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">Воротами<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">инфекции<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">являются<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">участки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">скарифика<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">ции<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">полученные<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">при<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">расклевах<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">других<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">повреждениях<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">протекают<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">как<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">энзоотии<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">редко<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">приобре<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">тают<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">характер<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">эпизоотии<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">птиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">может<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">возникнуть<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">любое<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">время<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">года<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:-.05pt">однако<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:-.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">чаще<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">тяжелее<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">она<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">протекает<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">зимой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">ранней<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">весной<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">так<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">как<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">это<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">время<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">у<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">птицы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">развиваются<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">гиповитаминозы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">нарушение<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">обмена<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">веществ<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">к<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">заболеванию<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">оспой<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">поражения<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">птиц<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">накожными<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">паразитами<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">гельминтами<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.2pt">респираторными<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.2pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">болезнями<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">респираторный<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">микоплазмоз<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ИБ<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ИББ<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">ИЛТ<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">), <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">повышенная<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">плотность<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">посадки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">антисанитарные<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">условия<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">содержания<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">.<span Goudy Old Style",«serif»">
<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">признаки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">Установлены<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">четыре<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">формы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">оспы<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">: <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">оспенная<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> (<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">кожная<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">), <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">дифтероидная<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">смешанная<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">и<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">ати<span Goudy Old Style",«serif»;color:black;letter-spacing: .15pt">­<span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">пичная<span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">или<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">скрытая<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">с<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">поражением<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">внутренних<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">органов<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">Бо<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">лезнь<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">протекает<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">преимущественно<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">подостро<span Goudy Old Style",«serif»;color:black; letter-spacing:.05pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">иногда<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.05pt">хрони<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.05pt">­<span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">чески<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">. <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">При<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">оспенной<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">форме<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">у<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">кур<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">на<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">коже<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">гребня<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.1pt">сережек<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.1pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">в<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">окружности<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">клоаки<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt">, <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">вокруг<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">клюва<span Goudy Old Style",«serif»; color:black;letter-spacing:.15pt"> <span Georgia",«serif»;color:black;letter-spacing:.15pt">и<span Goudy Old